Ngwakọta nri maka rabbits: mejupụtara, ọnụego kwa ụbọchị, otu esi eme aka aka gị - Anumanu - 2019
Esi na-eri nri rabbits na nri a pelleted
Ndị na-azụ anụ ọhịa maara na nri kwesịrị ekwesị bụ ihe mmesi obi ike nke anụmanụ, àgwà anụ na aji na-adabere na ya. Njikọ nri granulated bụ nhọrọ magburu onwe ya, n'ihi na o nwere ihe vitamin niile dị mkpa na ihe ndị na-achọpụta maka uru dị mma nke anụ ahụ, ma na-azọpụta onye nwe ya ka ọ ghara ịkwado elu ala maka oyi.
Ihe mejupụtara nke ndepụta na granulu maka rabbits
Otu esi choputa nri di elu mgbe ịzụrụ
Nri oriri kwa ụbọchị
Esi n'aka aka gị mee ndepụta ndị a zọlitere na rabbits
Ọdịiche na-edozi ahụ na nri
Ihe na njirimara nke oriri na-eri nri
Inye anụ ụlọ na-enye nri dị elu bụ ngwọta dị mma na nke ziri ezi, n'ihi na nri dị otú a na-eme ka ihe bara uru na vitamin niile dị mkpa, ọ bụghị naanị.
Ihe ndị dị mkpa nke nri dị otú ahụ bụ:
ịchekwa oge na mgbalị na ịzụ;
ihe dị mfe: inye rabbits otu ọnụego kwa ụbọchị (gosipụtara na ngwugwu), ị na-enye anụmanụ ahụ ihe ndị dị mkpa maka arụ ọrụ nkịtị nke ahụ; na mgbakwunye, nri dị otú ahụ na-ewepụ ihe ize ndụ nke oke ibu;
adabara rabbits fattening, n'ihi na nri a jikọtara ọnụ na-enye ihe kachasị na ya n'oge ọ bụla;
iji nri dị otú ahụ ewepụ mkpa ọ dị ịkpụ ọka ọka;
ihe vitamin ndị dị mkpa dị na granulu na oke zuru oke iji nọgide na-enwe nsogbu nke anụ ahụ.
Ị ma? Rabbits nwere ọhụụ pụrụ iche. Ndị a so n'òtù ndị agha ahụ nwere ike ịhụ ihe na-eme n'azụ ha n'agbanyeghị isi ha.
Ma n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke positives, ịzụ ndepụta ahụ nwere ụfọdụ ọghọm:
ụdị ụdị nri ọ bụla dị oke ọnụ, ya mere nri a dị oke ọnụ;
ndị na-emepụtaghị ihe arụ: ụfọdụ ụlọ oriri na-eri nri na-eji ngwaahịa ndị dị ala, nke na-ebelata uru bara uru dị otú ahụ.
Ọ dị mkpa! Otutu ndi oru ugbo ndi na-amu umu anu ulo ruo ogologo oge, ha na ndi ozo di iche iche, nke na-ewepu ihe ize ndụ nke inweta ihe di ala n'inweta nri.
A na-ekekọrịta nri niile na nke abụọ:
zuru oke - na mgbakwunye nke herbs na ihe ndị ọzọ dị mkpa ịchọta ihe, nke na-enye gị ohere ịnọgide na-enwe ihe niile dị mkpa n'anụ ahụ;
tinye uche - ngwugwu, nke a na-eji mee ihe dịka ihe ndabere, na mgbe e nye ha nri ka ha gbakwunye ụyọkọ ndị ọzọ na-agba agba (nke hay, ahịhịa, ahịhịa, wdg).
Ma ụdị nke mbụ na nke abụọ nke nri na-edozi ahụ nwere ihe yiri nke ahụ, nke gụnyere:
ọka (ọka, ọka bali, ọka, millet);
sunflower na nri soybean.
Ọ ga-aba uru maka ị mụta otu esi eri nri rabbits.
Dika ntinye nri ndi ozo tinyekwara:
anụ na azụ nri;
vitamin na mineral;
akọrọ na ahihia ohuru;
ọgwụ nje (adịkarịghị).
Iji jide n'aka na rabbits kachasị amasị gị na-eri ngwaahịa dị mma, ịkwesịrị ịṅa ntị n'ọtụtụ nkọwa dị ezigbo mkpa mgbe ị na-azụ akwụkwọ nri:
A ghaghị ịkwadebe nri kwesịrị ekwesị: nchịkọta plastik aghaghị ịdị nro.
Lelee ihe mejupụtara: ihe oriri na-edozi ahụ ekwesịghị ịbụ ihe mgbakwunye kemịkal na nchebe - naanị ihe ndị e kere eke.
Ngwurugwu kwesịrị inwe mmecha mma. Anụ ọka ochie nwere àgwà na-adịghị mma.
Ihe mejupụtara ga-abụ dịgasị iche iche: ihe ọka na ihe ndị ọzọ ọ dị na ya, ihe bara uru na ihe bara uru na ndepụta ahụ ga-abụ.
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ga-adịkwa nke ọma. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ile anya na ha iji chọpụta ihe.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ịzụta otu ngwaahịa ahụ nke enweghị mkpesa na rabbits na-eche nke ọma mgbe ọ gasịrị, ọ ka mma ịghara ịnwale ma nọgide na-enye ụmụ anụmanụ nri mgbe niile.
Onu ogugu kwa ubochi a choro maka ihe oriri nke umu anumanu bu ihe a na-acho na akpo ihe ndi na-emeputa ma na-adabere na afo na ọnọdụ nke rabbits:
rabbit uterine na oge ezumike - ọ bụghị ihe karịrị 180 g;
rabbits n'oge mating - 230 g;
nwanyị di ime - 170-180 g:
ịkọ ụmụ nwanyị n'ime ụbọchị 10 mbụ - 170-330 g;
ịkụzi ụmụ nwanyị site na nke 11 ruo n'ụbọchị 20 - 190-440 g;
ịkụzi ụmụ nwanyị site na iri abụọ na abụọ ruo ụbọchị iri atọ - 200-560 g;
Ịzụ ụmụ nwanyị malite na 31 ruo ụbọchị 45 - 230-700 g;
kwaa oke ahihia - 140 g;
2-3 ọnwa nwa rabbits - 250 g;
4-ọnwa-agadi rabbits - 280 g;
obere ngwaahịa mgbe ụbọchị 120 gasịrị - 200 g
Iwu maka nri rabbits bụ ezigbo mfe:
A na-eri ọtụtụ ọka niile site na ịzụ ụmụ nwanyị na-eto eto rabbits, ya mere ọ dị mkpa ịzụ ụmụ anụmanụ na oge.
A na-enye ụmụaka ahụ okpukpu isii n'ụbọchị na-agwakọta granul, ebe ọ bụ na ha adịchaghị oke.
Ọ bụrụ na oke bekee na-eto na nri nri, mgbe ahụ n'ụtụtụ na nke mgbede, ọ kachasị mma ịnye granulu, na nri ehihie - ihe oriri na-atọ ụtọ.
Ọ dị mkpa! Jiri nlezianya na-agbaso ntụziaka ndị a, dịka ihe ndị a na-enye aka iji sụgharịa ahụ ahụ n'ụzọ zuru ezu. Nri nri agaghị enye uru ọ bụla, kama nke ahụ, ọ ga-emerụ ahụ, ebe ọ bụ na pasent vitamin na-eme ka ọdịdị nke hypervitaminosis pụta, nke nwere ike ime ka nsị ahụ kwụsị.
Iji kwadebe nri ndị a na-eri nri n'ụlọ, na mgbakwunye na ngwaahịa ndị dị mkpa, ị ga-achọkwa ngwá ọrụ pụrụ iche, ya bụ:
Nkuku ọka Mkpụrụ ala na-enyere aka nweta ngwakọta dị iche. Ụzọ kachasị mma bụ iji kpochapụ ihe dị iche iche dị iche iche na-eme ka ihe dị iche iche dị na ya ma jikọta ya.
Granulator Ngwaọrụ a na-enyere aka ịhazi ahịhịa hay, ahihia, ahịhịa na-eme ka a ghara ikwe ya. Ngwakọta ọka ndị ahụ ga-enwe otu ihe ahụ edozi.
Mgbe ịkwadebe ngwá ọrụ na ịzụta ihe ndị dị mkpa, oge eruo iji chọpụta ihe dị mkpa (a na-agbakọ nọmba a maka 1 n'arọ nke nri edoziworo):
ntụ ọka bali - 200 g;
ọka ọka - 100 g;
ọka wheat - 100 g;
sunflower nri - 100 g;
nri nri ma ọ bụ hay - 400 g;
soy - 55 g;
nri ala - 22 g;
yist - 20 g;
nnu - 3 g
Ntụziaka a kwesịrị ekwesị maka nri nri, nke a na-azụlite maka anụ. Mana nke a abughi nani uzommeputa - enwere otutu ihe di iche iche, ihe kachasi bu ime ka o doo anya. Na ebe a bụ uzommeputa zuru oke maka nri maka rabbits, ịzụ ụmụ ọhụrụ, na ụmụ nwoke n'oge oge ịzụlite (a na-agbakọ nọmba a maka 1 n'arọ nke nri edoziworo):
ala ọka bali, ọka, wheat - 200/200/125 g, respectively;
chopped hay ma ọ bụ ahịhịa - 300 g;
sunflower achicha - 130 g;
azụ na anụ ntụ - 20 g na 10 g;
yist - 10 g;
nnu - 5 g
Ọ dị mkpa! Na enweghị akụkụ ọ bụla, ọ ka mma ịghara iji ihe ọ bụla ọzọ dochie ya, ebe ọ bụ na ntakịrị nhiehie nwere ike ịgbanye nri dị otú ahụ na-abaghị uru.
Oge ezumike bụ oge zuru oke iji nweta ihe ndị dị mkpa na-emepụta ihe dị mkpa, ebe ọ bụ n'oge okpomọkụ na e nwere ọtụtụ mkpuru akwụkwọ, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi. A na-enye ngwugwu mmanya n'oge okpomọkụ dị ka usoro oge a, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla dị na nri. Otú ọ dị, oyi bu oge nke afọ mgbe rabbiti kwesịrị iji calorie ka njọ iji kpoo ahụ ha, ya mere, n'oge a, onye kwesịrị ịkpachara anya mgbe ụmụ anụmanụ na-azụ nri. Enweghị vitamin na oyi nwere ike ime ka mbelata na ọrịa na, n'ihi ya, ọrịa dị iche iche.
N'oge oyi, nhọrọ kachasị mma bụ iji gbanwee ntanye zuru ezu, nke ga-ewepụ ngwaahịa ndị ọzọ, mgbe ahụ ga-ejupụta na ihe niile. Ọzọkwa, ụfọdụ ndị ọkachamara na-akwado ngwa ngwa na-abawanye òkè kwa ụbọchị, ya bụ, tinye 1 ọzọ nri.
Ị ma? Inye nri zuru oke bu ihe ruru rabbits, n'ihi na anumanu a na-eme ka okpukpu abuo na-eri ndu n'otu nkeji mgbe o na-eri nri, ihe nari iri di n'ime onu ruru ihe ruru puku iri abuo.
Ya mere, nri a na-eri nri bụ "efere" dị mma maka anụ ọhịa dị iche iche n'oge okpomọkụ na oyi. Ọ dị nnọọ mfe ịmepụta ngwaahịa a n'ụlọ ma ghara iwepụta oge dị ukwuu, mana ọ na-achọ ihe dị oké ọnụ ahịa, ma enwere ụzọ dị iche iche - iji zụọ anụ ụlọ gị nri, ihe bụ isi bụ ịchọta ngwaahịa dị mma na onye na-emepụta ihe.
Esi esi esi nri currant jam "minit ise"
Silver Dichondra: Ihe Nzuzo Na-eto Eto Na-aga nke Ọma
Esemokwu dị n'etiti Cumin na Coriander
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Esi na-eri nri rabbits na nri a pelleted